एनआरएन अमेरिकाको साधारण सभामा भाग लिन पूर्व मन्त्री भुषाल अमेरिका आउँदै, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
एनआरएन अमेरिकाको साधारण सभामा भाग लिन पूर्व मन्त्री भुषाल अमेरिका आउँदै
काठमाडौँ । पूर्व राज्य मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रेवती प्रसाद भुषाल अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक भेला तथा एनआरएनए अमेरिकाको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्न अमेरिका आउने भएका छन्।
पूर्व राज्य मन्त्री भुषाल आगामी जून १६ र १७ तारिकका दिन अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्कोमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक भेला तथा एनआरएनए अमेरिकाको साधारण सभामा विशेष अतिथिको रूपमा भाग लिन अमेरिका आउने भएका हुन्।
आगामी जून १६ र १७ तारिकका दिन अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्कोमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक भेला तथा एनआरएनए अमेरिकाको साधारण सभा हुँदै छ।
एनआरएन अमेरिकाद्वारा विज्ञ सम्मेलनमा सहभागिताका लागि आह्वान
गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र एनआरएन राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकाको संयुक्त पहलमा जुन १६ र १७ मा विदेशमा बसेर आफ्नो क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्नु भएका बौद्धिक व्यक्तित्वको सहभागितामा विज्ञ सम्मेलन र त्यस लगत्तै एनआरएन अमेरिकाको साधारण सभा हुदैंछ । यी दुवै कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिताका लागि हामी सबै गैर आवासीय नेपाली समुदायलाई आग्रह गर्छौ ।
यस कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी प्रमुख अतिथि हुनु हुने छ । कार्यक्रममा एनआरएनएका अध्यक्ष भवन भट्ट, आईसीसीका पदाधिकारीहरू लगायत विभिन्न देशबाट एनआरएनएका पदाधिकारीहरू सहभागिता जनाउनु हुने छ। विदेशमा बस्ने नेपाली बौद्धिक समुदाय, सरकारका वरिष्ठ अधिकारी र एनआरएनएका पदाधिकारीहरू सम्मिलित हुने यो आफैँमा महत्त्वपूर्ण अवसर हो ।
नेपालको विकास र समृद्धिमा विदेशमा कार्यरत नेपाली बौद्धिक समुदाय कसरी संलग्न हुन सक्छ भन्ने विषयमा सम्मेलनको पहिलो दिन छलफल हुने छ । यस पछि एनआरएन अमेरिकाको साधारण सभा हुने छ । कयौँ क्षेत्रका विज्ञहरूले यस सम्मेलनमा सहभागिता हुने सहमति जनाइसक्नु भएको छ । नेपालमा गर्न सकिने र तत्कालका आवश्यकता देखिएका स्वास्थ्य, पूर्वाधार, विकास, जस्ता क्षेत्रका विज्ञहरूले आफ्ना धारणाहरू राख्नुहुने छ । नेपाल सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा यो सम्मेलनमा आउने विचारहरू उपयोगी हुने छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
एनआरएन अमेरिकाको साधारण सभा नियमित प्रक्रिया लगायत भावी रणनीतिको योजना बनाउन महत्त्वपूर्ण अवसर हुने हामीले ठानेका छौँ । आईसीसी र एनसीसीको संयुक्त रूपमा हुन लागेको यो कार्यक्रम आफुंमा महत्त्वपूर्ण छ । यसैले यस भेलामा सहभागिताका लागि हामी यहाँहरू सबै नेपाली समुदायलाई आग्रह गर्छौैं ।
यस भेला एनआरएन समुदाय बिच आपसी सञ्जाल विस्तार गर्ने मौका पनि हो । यसैले पनि हामी यहाँहरू सबै एनआरएन साथीहरूलाई सम्मेलनमा सहभागिताका लागि आग्रह पनि गर्छौ । यो सम्मेलन क्यालिफोर्निया सनफ्रान्सिस्को स्थित होटेल डलव ट्रिमा हुने छ । सम्मेलनका बारेमा थप जानकारी चाहिए सम्पर्क गर्न सक्नुहुने छ ।
सम्मेलन संयोजक तथा उपाध्यक्ष एनआरएन अमेरिका